Lakho, Iilayisensi kwi-Norway - Bomi Norway - Abaqondisi-mthetho ka-Norway! Isithai abaqondisi-mthetho, a isemthethweni portal.
Lakho, Iilayisensi kwi-Norway - Bomi Norway
Njengoko kunye kakhulu izinto malunga uyise ukuba Norway, imigaqo egameni lakho, iilayisensi kuxhomekeka yakho ilizwe ubumi, okanye ngaphezulu, ingakumbi, eli lizwe ukuba yena akhuphe iphepha-mvume lemoto yakhoKuqala izinto kuqala, ukuba unengxaki iphepha-mvume esuka i-EU okanye EEA eli lizwe, angasetyenziswa kwi-Norway kunye akukho hassle kuba njengoko ixesha elide njengokuba kubhaliwe siyasebenza. Banako kanjalo kuba exchanged kuba isithai iphepha-mvume lokuqhuba ngaphandle naziphi na iimvavanyo. Xa ukhethe exchanged ngayo, yakho iinqwelo-mvume iya kuba babuyele kwelayisenisi lizwe, kwaye yakho entsha isithai iphepha-mvume iya kuba osebenzayo kuzo zonke EU - EEA amazwe. Ukwenza oku, kufuneka yiya kwi-umntu ukuba umqhubi kwaye isithuthi nephepha-ofisi okanye ufake isicelo sakho ngeposi. Nibe sebenzisa yakho semthethweni iphepha-mvume lokuqhuba ukusuka na ilizwe kuba phezulu ukuya kwiinyanga ezintathu kwi-Norway, nokuba ufaka nje makhaya okanye ingaba ucwangciso ukuba uhlale. I-ngamazwe mvume lokuqhuba ezifunekayo njengoko a eyongeziweyo ukuba iilayisenisi ukusuka amanye amazwe. Zonke isithai imithetho ezindleleni kufuneka kanjalo kubekho yamthobela, kubandakanya ubudala izithintelo. Ukuba ufuna isicwangciso ukuba relocate ukuba Norway ukusuka non-EU - EEA eli lizwe, precise imigaqo kuxhomekeka apho ilizwe sele ekhutshwe iphepha-mvume lemoto yakho. Ukuba une-mvume lokuqhuba ukusuka Japan okanye Senegal, unako ukutshintsha kuya kuba isithai omnye ngaphandle ekubeni ukuba nihlale a isebenziseke uvavanyo njengoko ixesha elide njengoko kufuneka yenze ungaphelanga unyaka ka-relocation.
Abemi abanye amazwe unako ukutshintsha zabo iphepha-mvume kuba isithai omnye phezu ukuphunyezwa a isebenziseke uvavanyo lokuqhuba, kodwa oku kufuneka kwenziwe ungaphelanga unyaka ka-relocation.
Ezi amazwe ngala: Australia, Ekhanada, Hong Kong, Usirayeli, i-monaco, Enew Zealand, palau, i-South Korea ne-USA. Ukuba ufuna unobuhle i-deadline, kufuneka athabathe inkqubo esisinyanzelo uqeqesho kwaye okokuba zozibini inkumbulo uvavanyo isebenziseke uvavanyo.
I-exchange kufuneka izaliswa ngaphakathi emibini, ngexesha imihla, kokufumana olusisigxina idilesi kwi-Denmark.
Kuba wonke umntu ongomnye, kufuneka ufumane isithai iphepha-mvume lokuqhuba ngendlela efanayo njengoko na lokuqala-ixesha isithai-sicelo.
Uza kwazi ukuba tsibela ezinye ezisisiseko uqeqesho, kodwa kufuneka kwakhona uzalise compulsory ezibini ezifana busuku lakho, umyalelo, kuqala aid kwaye kunokwenzeka ingozi uqeqesho, ihamba kunye ukuphunyezwa komgaqo-inkumbulo kunye isebenziseke iimvavanyo. Ngaphezulu ulwazi malunga ilungelo drive kwi-Norway kusenokuba wazuza ukususela isithai kwiindlela zikawonke-Wonke Nolawulo. Nceda ndiya kuvunyelwa ukuba lokuqhuba kunye wam ngamazwe iphepha-mvume lokuqhuba.
Kusasa ukusuka Ghana West Africa ndiza a Malaysian kwaye bamba elisebenzayo sephepha-mvume lokuqhuba, ingaba ndidinga i-ngamazwe sephepha-mvume lokuqhuba ukuba drive kwi-Norway ngenxa yam isibhozo iintsuku vacation.
Mna kuba semthethweni umqhubi ke licenses ukusuka kwi-India, i-United Arab Emirates kwaye Mozambique. Ingaba ndiya kwazi ukuba exchange enye yezi Apho ingaba ndiya uhlaziye a isithai iphepha-Mvume Lokuqhuba kwi-Bergen. Ndina ukuba layo amabini anesithandathu septemba Amazwi Norway ukuxelela i-stories of Norway ehlabathini, kwaye ngokuphonononga isithai iinkampani ingaba efanayo.
Mergers kwaye Acquisition kwi-Norway
Effettiv restawr tal-ekosistemi akwatiċi ScienceDaily